သူ လေး ပေး တဲ့ အ ရ သာ – Hlataw.com
ကျွန်မနာမည်က နာမည်က မေဣနြေ္ဒအောင် ……ကျွန်မက တစ်ဦးတည်းသေးသမီးဆိုတော့အိမ်ကလဲအရမ်းချစ်ကြတာလေ ……ငယ်ငယ်တည်းကပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာ ကစားဖော်ကစားဖက်က ယောက်ျားလေးတွေချည်းပဲဆိုတော့ ကျွန်မလဲသူတို့နဲ့ပေါင်းပီး ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လိုပုံစံဖြစ်နေတာ ကျားကျားယားယားပေါ့….
အိမ်ကလဲတစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးဆိုတော့ချစ်လို့ ကျွန်မနေချင်သလိုပဲနေခိုင်းခဲ့ကြတာ …..သူတို့လဲ ကျွန်မကိုသားတစ်ယောက်လိုပဲသဘောထားကြတာလေ…..ကျွန်မကလဲ ကိုယ့်ကိုကိုလဲ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လိုပဲ ခံယူထားတာ …..ယောက်ကလျာပေါ့….မိန်းကလေးကယောကျာ်းစိတ်ပေါက်တာ မြတ်သေးတယ် ……
တချို့ဆို မြင့်မြတ်တဲ့ယျောက်ားဘဝကိုရတာတောင် ပုန်းနေနဲ့သူနဲ့ ပွင့်နေတဲ့သူနဲ့လေ…..ထားပါတော့ အခြောက်တွေကျွန်မကိုဆဲနေပါဦးမယ် ခ်ခ်…….ငယ်ငယ်တည်းကအကျင့်ပါနေတော့ စကားပြောရင် ကျွန်တော် ခင်ဗျား ပဲပြောတတ်တယ်လေ…..
အတန်းဖော်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ဘောလုံးတွေကန် ရေကူး စုံနေအောင်ကမြင်းတာ…..အဲ့လို လွန်အားကြီးလို့လဲ နာမည်အရင်း မေဣနြေ္ဒအောင် ကနေပီး အောင်ကြီး အောင်ကြီးလို့ပဲ ခေါ်ကြတော့တယ် …
ကျွန်မမိဘတွေကလဲ ပိုက်ဆံနဲနဲချမ်းသာတယ် ပီးရင် ကျွန်မကလဲ ကလေးဘသာဝလွန်သာလွန်တာ မဆိုးသွမ်းတဲ့သူဆိုတော့အရပ်ထဲကဝိုင်းချစ်ကြတာပေါ့…….ဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ကျွန်မလဲအပျိုဖော်စဝင်နေပြီလေ….ကျွန်မနို့လေးတွေ စူလာတယ်…
ရာသီလာတာတို့ဘာတို့လဲ စဖြစ်လာတယ် …….ပီးကျ ကျွန်မစောက်ဖုတ်မှာ အမွှေးနုလေးတွေလဲ ရေးရေးလေးဖြစ်လာပီလေ…..အာ့တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်မမုန်းတယ် အဲ့တုန်းကပေါ့…..ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ယျောက်ားလေးလို့ပဲခံယူထားတာလေ…ဒါတွေဖြစ်လာတော့ အရမ်းကိုစိတ်တိုနေတာ…နို့လေးနွေကလဲတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုပိုစူလာတော့ အကျီအပွတွေဝတ်ပေမဲ့ ချွန်နေတာလေ….မဝတ်လို့ကလဲမဖြစ်တော့ဘူး ……
အာ့ကြောင့်ဘော် လီ(ဘရာစီယာ)အစား အကျီဆွဲသားအကြပ်လေးတွေကို ဝတ်ရတယ်လေ….နဲနဲတော့သက်သာတာပေါ့ ဘာမှအဝတ်တာထက်စာရင်……
ကျွန်မပုံစံကိုပြောရရင် ကျွန်မက ယောက်ကလျာ (ဘောပြား) သာဖြစ်တာ….သူများတွေလို ပြားချပ်ချပ် မဟုတ်ဘူး …..ဖင်အိုးလဲရှိ ရင်လဲရှိတဲ့ အကိတ်တစ်ယောက်ပါပဲ……
ယောက်ျားလေးသယငယ်ချင်းတွေဆို ဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်နဲ့ သွေးတိုးစမ်းအသားယူနေကြတာ ပေါ့ ….ကျွန်မလဲထိုးမယ်ကြိတ်မယ်နဲ့ ပြန်ဖြဲထားလို့ ငြိမ်နေကြတာ…..
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ၁၀တန်းနှစ်မှာ ကျွန်မတို့ကျောင်းကို တခြားကျောင်းကကောင်မလေးတစ်ယောက်ပြောင်းလာတယ်လေ…..ကောင်မလေးကအကိတ်ကလေး ….
ချစ်စရာလေး…ကျွန်မကလဲ `ဇ´ရှိပီးသား….အတန်းထဲက ကောင်မလေးတော်တော်များများနဲ့ ဂဲလ် တူ ဂဲလ်(မိန်းခလေးချင်း) ဇာတ်လမ်းတွေခင်းဖူးပြီးသားပဲကိုး…..အဲ့ကောင်မလေးပြောင်းလာတော့ အသစ်မြင်နော့အဟောင်းမေ့ပြီး …….အောင်ကြီးဘောပြားတစ်ယောက် ဖွန်ကျောင်ပြီလေ……
ကျွန်မကလဲစာကတော် ပီးရင် မိဘဆရာအသင်းမှာအိမ်ကဖားသားကြီးက ဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့မျက်နှာရပြီးသားပဲလေ……ကျွန်မအဲ့လိုအတန်းထဲကကောင်မလေးတွေကို တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဂဲလ် တူ ဂဲလ် တွဲတာများတော့ အတန်းထဲက ယောက်ျားလေးတွေက ကျွန်မကို စသလိုနောက်သလိုနဲ့ အောင်ကြီးရာ မင်းလက်ချက်နဲ့တင်အကုန်စုတ်ပြတ်သတ်ကုန်ပါပြီလို့လေ……
အဲ့လိုဆိုကျွန်မလဲကျေနပ်တာပေါ့ ကိုယ့်ကိုကိုလဲ ဂုဏ်တွေယူသလိုပဲ…..ဒီလိုနဲ့ပဲ အဲ့အသစ်ကောင်မလေးနဲ့ ဂဲလ် တူ ဂဲလ် တွဲဖြစ်သွားတာပေါ့….
ကျူ ရှင်က ည၈နာရီလောက်မှပြန်ရတာဆိုတော့အမြဲနောက်ကျနေတာလေ…အဲ့လိုဆို အဲ့ကောင်မလေးကို ကျွန်မ ကလိုင်းပြီ….လစ်ရင်လစ်သလိုပေါ့…..
မလစ်တော့လဲ ကစ် လောက်ပဲဆွဲပီး ပြန်ခဲ့ရတာပေါ့….အဲ့ကောင်မလေးကြ ကျွန်မဘယ်လောက် ကလိုင်းကလိုင်း ကြမသွားဘူး လေ…..
သူ့ကိုယူတဲ့ယောကျ့ားကတော့ ကံကောင်းတာပဲလို့နောင်တွေးမိတယ် …..ကျွန်မနဲ့တွဲတာက တမင်အပျော်သက်သက်ဆိုတာကျွန်မလဲသိပါတယ်….
ဒီလိုနဲ့သူနဲုကျွန်မ တစ်နေ့ ကျွန်မအိမ်မှာစာကျက်ရင်းနဲ့ ချစ်ရည်လူးကြတာပေါ့ ချစ်ရည်လူးပေမဲ့လဲသူ့အတွက်ပါပဲ ကျွန်မကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ပေါ့…..
ကျွန်မတို့အိမ်ကတိုက်ခံအိမ်နှစ်ထပ်လေ….အပေါ်ထပ်မှာကျွန်မတစ်ယောက်တည်းပဲနေတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ…..အဲ့အခန်းထဲမှာသူ့ကိုကျွန်မ ကောင်းကောင်းကလိုင်းပေးတာပေါ့…..
ကျွန်မက ညဖက်ဆို ဖုန်း ကနေ အောကားတွေကြည့် အောစအုပ်တွေဖတ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် ဘယ်လိုကိုင်ရတယ်ဆိုတာသိပ်ကျွမ်းနေတာလေ…
သူ့ကိုကောင်းကောင်းမှုတ်ပေးတယ် နို့တွေစို့ပေးတယ်..သူလဲဖီးလ်ကိုအရမ်းဖြစ်နေတာပေါ့ ……အဲ့လိုနဲ့ ကျွန်မတို့လုပ်ပီးသွားတဲ့အခါမှာ သူကကျွန်မကိုပြောတယ် …..
ကျွန်မတို့မိန်းကလေးချင်းလုပ်နေနာနောင်ဒီလောက်ကောင်းရင်တဲ့ ယောက်ျားလေးအစစ်ရဲ့လီးနဲ့သာဆိုဘယ်လောက်ကောင်းမလဲပေါ့…..ကျွန်မလဲတင်းသွားတာပေါ့ …..အစတည်းကမှ ကျွန်မကကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ယောက်ျားလေး လို့ခံယူထားနာဆိုတော့ သူအဲ့လိုပြောတော့ကိုယ့်ကိုမကြိုက်သလိုဖြစ်ပြီးနေတာပေါ့….
တော်ပီသူ့ကိုလဲဆက်မတွဲနော့ဘူးဆိုပြိး ဖြတ်လိုက်တယ် …….ဒီလိုနဲ့ကျွန်မတို့စာမေးပွဲတွေဖြေပီးပီလေ….သူလဲတခြားမြို့ကိုပြောင်းသွားတယ်…..
အောင်စာရင်းမထွက်ခင်အထိ အိမ်မှာ ကျွန်မလဲအိပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ အောကားတွေကြည့် ပီး အထီးကျန်နေခဲ့နာပေါ့ ……အောင်စာရင်းထွက်တော့ အောင်တယ်လဲဆိုရော တက္ကသလိုလ် တက်ရပီလေ…..
တက္ကသလိုလ်လဲရောက်ရော အပေါင်းအသင်းကပိုဆံ့ပြီး မသိတဲ့သူမရှိမခင်တဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်သွားရော ကျောင်းမှာ ဆရာကန်တော့ပွဲဆို ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လို သရုပ်ဆောင်ကပြတော့ ပိုပြီးသတိထားမိကြတာပေါ့……
အသောက်အစားတွေလဲလုပ်တတ်လာပြီလေကျွန်မဘောပြားတစ်ယောက်……ဂရမ်း အပြာဆို အပိုင်းပြားတစ်ပြားလောက် ကုန်တယ် တိုက်ဂါးး ဆို သုံးလုံးလောက်ကုန်တယ် ……
အဲ့ကြမှ အောင်ကြီးကနေ ကြွက်ကြီးဖြစ်တော့တာ…..အဆောင်မှာနေကြတာဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေစုမိရင် ယောက်ျားလေးအကြောင်းပဲပြောကြတာလေ……
ပြောကြတာလဲသူတို့ပါ ကျွန်မကတော့ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်လို့ခံယူထားတော့ သူတို့ထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ဟိုကောင်လေးက ခန့်တယ်တို့ဘာတို့ဆို ကောင်မ ရွတယ်ဆိုပိး မရ ရအောင်လိုက်ပီး အဲ့စော်ကို ကလိုင်းတာ…….
ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်ကိုလဲကြည့်ပီး နင်သာမိန်းကလေးလိုဝတ်ပီးအလှပြင်လိုက်ရင် အကိတ်တစ်ယောက်ပဲ ဘဲတွေဝိုင်းနေမှာပဲလို့ပြောကြသေးတယ်လေ……အဲ့လိုဆိုကျွန်မအရမ်းတင်းပြီး ပြသနာရှာတော့တာပဲ…..
နောက်ပိုင်းကြပြောမရလို့ထင်ပါတာ် ကျွန်မကို မိန်းကလေးလိုဝတ်ခိုင်းဖို့လက်လျှော့လိုက်ကြတယ် …….အဲ့မှာလဲ ကျွန်မနဲ့ ဂဲလ် တူ ဂဲလ် စခန်းမသွားဖူးတဲ့သူခပ်ရှားရှားရယ်……
အဆောင်က အဆောင်မှူးအပျိုကြီးတောင် ကျွန်မသူ့ကိုကလိုင်းပေးလိုက်တာ …..နောက်ကြတော့ သူ့ပါသူတောင် ခရမ်းသီးနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေတတ်ပြီလေ…. ကျွန်မကဘောလုံးဝါသနာအရမ်းပါတာလေ …အာ့ကြောင့်လဲ ယောက်ကလျာဖြစ်တာနေမှာ …..
အဲ့တုန်းကဆို ရောနဒို က မန်ယူမှာပဲရှိသေးတယ်……အိုင်ဒေါ ကြိးပေါ့…..ကျောင်းမှာအားစကားပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တော့ ကျွန်မလဲ ဝင်ကန်တာပေါ့ ကျွန်မတို့မေဂျာရဲ့ ယောက်ျားလေးအသင်းကနေ…. ဒိလိုနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ကျွန်မတို့ အီးမေဂျာနဲ့ ဂျီအို နဲ့ ကန်တဲ့ပွဲမှာ ရှုံးပါလေရော ……အရမ်း စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့……လှောင်ကြသေးတယ် ဘောပြားပါလို့ရှုံးတာပေါ့ နော်…..
ကျွန်မလဲအရမ်းစိတ်တွေညစ်ပီး…အဲ့ညက ကျွန်မယျောက်ားလေးသူငယ်ချင်းသုံးယောက်နဲ့ အရက်သောက်ဖို့ထွက်ခဲ့ကြတယ် …..
ကျွန်မကဆိုင်ကယ်တစ်စီး ကျန်တဲ့သုံးယောက်ကဆိုင်ကယ် နှစ်စီးနဲ့ ပေါ့…… ကျွန်မတို့ထိုင်တဲ့ဆိုင်လေးက ဆောင်းစက်ရိပ်ခိုတဲ့……ဒီအောစာအုပ်ဖတ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ ထိုင်ဖူးတဲ့သူတွေပါလောက်မလားပဲ…..
စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ကျွန်မလဲအလှောင်ကလဲအလှောင်ခံရ ရှုံးကလဲရှုံးဆိုတော့ ညစ်ပီးသောက်တာ …….တော်တော်များသွားတယ် …..
အဆောင်ကလဲ ၁၀နာရီဆိုပိတ်တာလေ….ပြန်လို့မရတော့ဘူး …..အရင်ကလဲကျွန်မအပြင်တွေသွားလို့နောက်ကျရင် ပြန်မအိပ်တော့ဘူးလေ အဲ့အနားကဟိုတယ်လေးတစ်ခုမှာပဲအိပ်လိုက်တယ်….
အဲ့လိုဆိုနော့ကျွန်မအတွက်သိပ်မထူးဆန်းဘူးလေ…..ကျွန်မသူငယ်ချင်း၃ယောက်ထဲက၂ယောက်က ပြန်မယ်တဲ့ သူတို့အိမ်သူတို့..ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကကျွန်မကို ဟိုတယ်လိုက်ပို့ပီးမှပြန်မယ်ပေါ့ ….ဒိလိုနဲ့ထွက်လာတာ…..ဟိုတယ်နားရောက်ကာနီးမှ ဆိုင်ကယ်ကဆီပြတ်ပါလေရော …..၁၁နာရီဆိုဆိုင်တွေကလဲပိတ်နေကြပီလေ…မထူးဘူးဆိုပိးသူလဲ ဒီမှာပဲအိပ်တော့မယ်ပေါ့……
အစကတော့တစ်ယောက်တစ်ခန်းအိပ်မလို့ပဲ …..ဟိုလဲရောက်ရော အခန်းကတစ်ခန်းပဲရှိတော့တယ်တဲ့ ဘုရားဖူးဧည့်သည်တွေနဲ့ပြည့်နေလို့တဲ့ ဒါတောင် အဲ့ဟိုတယ်က လာရင်တည်းတဲ့အခန်းတဲ့ ….
ကဲ အခုမှတော့မထူးဘူးဆိုပြီး အဲ့မှာပဲအိပ်ကြဖို့လုပ်ပီး အခန်းယူလိုက်တယ် ခန်းထဲရောက်တော့ သူလဲ ကျွန်မအနေအစားကြပ်မှာစိုးလို့ထင်ပါတယ် မျက်နှာလွှဲပီး တီဗီ ဖွင့်ဖို့လုပ်နေတယ်လေ……
အာ့နဲ့ ကျွန်မလဲ သူ့ကိုငါတို့ကသူငယ်ချင်းတွေပဲပေါ့…ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပေါ့ အာ့နဲ့ ရေချိုးဦးမယ်ဆိုပီး ကျွန်မလဲ သူရှေ့မှာတင် ဟိုတယ်ကသဘက်နဲ့ အကျီအဝတ်အစားတွေချွတ်ပီး ရင်လျားပီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ခဲ့တယ် သူကတော့ တီဗီ ကြည့်နေတယ်….ကျွန်မကနော့ပုံမှန်ပါပဲ ….
ဘောလုံးကန်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာတောင် သူတို့ရှေ့မှာတင် ဘောလုံးဂျာစီတွေလဲဘာတွေလဲ လုပ်ဖူးနေတော့အခုလဲမထူးဆန်းသလိုပါပဲ ..
သူကတော့ နှစ်ယောက်တည်းရယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့်လားမသိပါဘူး…..ကျွန်မအဝတ်အစားလဲနေတာမြင်တော့ မျက်နှာကြီးကိုရဲသွားတာပဲ တံတွေးတွေလဲမြိုချနေတာရိပ်မိတယ် …….
အာ့နဲ့ကျွန်မလဲရေချိုးပီးတော့ ဟိုတယ်က ညဝတ်အကျီ (သဘက်ကိုခါးစည်းထားတဲ့ဟာ) ကိုလဲပီး ခနထိုင်နေတယ်….
ရေချိုးလိုက်လို့လားမသိဘူး အမူးတောင်နဲနဲပြေသွားတယ်လေ….သူ့ကိုထပ်သောက့ဦးမလားမေးတော့ မငြင်းဘူး တိုက်ဂါးနှစ်လုံးနဲ့ ခေါက်ဆွကြော်မှာပီးထပ်ကစ်လိုက်တယ် ……
သောက်စားပီးတော့ ၁၂ခွဲလောက်ဖြစ်သွားပီလေ….အာ့နဲ့အိပ်ချင်နေတာနဲ့ပဲ အိပ်မလို့လုပ်တော့ သူက ကြမ်းပြင်မှာ သဘက်ခင်းပီးအိပ်မလို့လုပ်ရှာတယ် ….
ကျွန်မလဲသနားတာပေါ့ အဲ့လိုကျ လာပါလို့ သူငယ်ချင်းတွေပဲလို့ ဒီကုတင်ပေါ်မှာပဲအိပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ် …အာ့နဲ့မူးစစနဲ့ဆိုတော့ခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းထိရုံပဲရှိသေးနယ် အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့…..
အိပ်ပျော်ကာမှပိုမူးသလိုပဲလေ…..အိပ်ပျော်ပီးသိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး စိတ်ထဲမှာ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမချစ်ရည်လူး လိုးပွဲနွှဲမလို့နှူးနှပ်နေတဲ့အရသာကို အိပ်မက်ထဲမှာလိုလိုအပြင်မှာလိုလိုနဲ့ ခံစားနေရတယ်လေ …
ကျွန်မကိုပဲယျောက်ားတစ်ယောက်ကလုပ်နေသလိုလို ကျွန်မကပဲ မိန်းကလေးချင်းချင်းကလိုင်းပေးနေသလိုလိုပဲ…မူးနေတာဆိုတော့ သိပ်မသဲကွဲဘူး …..မျက်လုံးကိုမနဲအားယူပီးဖွင့်လိုက်တော့ ကျွန်မကိုယ်ပေါ်မှာဘာအဝတ်အစားမှမရှိတော့ဘူး …..
ကျွန်မသူငယ်ချင်းက ကျွန်မကိုလိုးဖို့နှူးနှပ်နေတာလေ..သူ့လက်ကလဲကျွန်မစောက်ဖုတ်ကို နှိုက်နေတယ် လက်ကလဲနို့ကိုနယ်နေတယ် ….
ကျွန်မလဲ မိန်းကလေးအချင်းချင်းဆိုရင်ကျွန်မကပဲလုပ်ပေးနေကြဆိုတော့ အခုသူလဲလုပ်ပေးရော ငြင်းလဲမငြင်းချင်တော့ဘူး ယောက်ကလျာမ လီးအစစ်နဲ့အလိုးခံရကာနီးကြမှ နုရွနေရပြီလေ……
ကျွန်မလဲခေသူမဟုတ်ပဲ အလိုးသာမခံဖူးသေးတာ ဘယ်လိုပေးရတယ်ဆိုတာ အောကားတွေထဲမှာသိပြီးသားပဲဆိုတော့ သိပ်ပီးအထုးတလည်မဟုတ်တော့ဘူးလေ…..
အဲ့လိုနဲ့သူကျွန်မကို နှူးနှပ်နေရင်းကနေ ကျွန်မစောက်ဖုတ်ကိုသူ့လျှာပြားကြီးနဲ့ အောက်ကနေအပေါ်ကိုယက်တင်လိုက်တာ များ ကျွန်မ က်ြသီမွှေးညှင်းတွေတောင်ထရတယ်…ကောင်းလွန်းလို့လေ…..အဲ့လိုနဲ့မိနစ်၂၀လောက် သူကျွန်မစောက်ပတ်ကလေးကို ယက်ပေးနေလိုက်တာ….
ကျွန်မလဲကောင်းလွန်းလို့ သူ့ခေါင်းနဲ့ကျွန်မစောက်ပတ်နဲ့ကို အကွာမခံပဲခေါင်းကိုကိုင်ပီးကပ်ထားတာ……မိနစ်၂၀လောက်အတွင်းမှာ ကျွန်မ၃ခါလောက်ပြီးသွားတယ်လေ ……
သူလဲညောင်းနေလောက်ပီဆိုတာကျွန်မနားလည်တာကတစ်ကြောင်း အလိုးကလဲခံချင်လှပြီဖြစ်တာကတစ်ကြောင်းမို့ နှစ်ယောက်သားခနနားနေခဲ့တယ်….အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မလဲသူ့လီးကိုအရမ်းစုပ်ပေးချင်နေတာ…..အောကားတွေထဲမှာဆို မိန်းမနဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်တလဲမှုတ်ုကတာလေ…..
အာ့ကြောင့်ကျွန်မလဲသူ့ကိုမှုတ်ပေးချင်နေတာ…..သူကနော့ ကျွန်မကိုအားနာလို့ထင်ပါတယ် ဘာမှအရိပ်အယောင်မပြပဲ…..နေနေတော့ ကျွန်မလဲကိုယ့်သိက္ခာနဲ့ကိုယ်နေနေရနာပေါ့……
ခနားပီးတော့သူကနို့ကို လေးငါးချက်လောက်စို့ပီး သူ့လီးကိုလဲဆွနေတယ်လေ….သူ့လီးကြီးကလဲနဲတာကြီးမဟုတ်ဘူး..လူကအသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်ရှည် ခပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဆိုတော့ လီးကလဲ အမေရိကန်လီးနီးပါးပါပဲ……
ပီးတော့မှ ကွန်ဒုံးကိုစွပ်လိုက်တယ် ကျွန်မကို ပက်လက်လှန်အနေအထားကနေ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုသူ့လက်နဲ့မြျှောက်ပေးပြီးလီးကိုကျွန်မစောက်ပတ်ထဲထည့်ကြည့်တယ် ကျွန်မကအပျိုရည်မှမပျက်သေးတာ မဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်လေ……ကျွန်မကလဲ ဇ နဲ့ပဲကို……အမေရိကန်အောကားထဲကကောင်မတွေလို ခြေထာက်နှစ်ချောင်းကိုသေချာမြှောက်ပေးပိးး လက်နဲ့နဲနဲဖြဲပေးလိုက်တယ် သူလဲအဲ့ကျမှ ကျကျနနထည့်ပီး အားနဲ့နဲနဲဖိချလိုက်တယ် ……”အား …အမလေးသေပါပြီ…..
အားဟားဟား…..” ကျွန်မအဲ့အချိန်မှာတော့နာတာပဲသိတယ် …သူကလဲနဲနဲကြိတ်ခံပေးပါတဲ့လေ…..ကျွန်မလဲ ကြိတ်ခံပေးလိုက်ပါတယ် နဲနဲပြန်ထုတ်ပီး တံတွေ့းဆွတ်ပြီး ပြန်ထည့်ပြီး ဖြည်းဖြည်း အသွင်းအထုတ်လုပ်နေရင်းက နဲနဲစီထိုးထိုးထညိ့်လာတယ်……
ကျွန်မလဲကောင်းလွန်းလို့ ငြီးနေရတယ်…..သူအဲ့ပုံစံအတိုင်းကို နာရီဝက်လောက်လိုးပေးတယ်လေ …..ကျွန်မလဲစောက်ရည်တွေခနခနထွက်ကျတာပဲ ….
ဘယ်နှစ်ချီမှန်းကိုမသိဘူးပီးတာ….အာ့နဲ့ သူက လေးဖက်ကုန်းပေးဖ်ု့ပြောတယ်လေ…..ကျွန်မအောကားကြည့်ရင်ဂျပန်မလေးတွေလေးဖက်ကုန်းပေးတာကိုသိပ်သဘောကျတာ…..
ဖင်လုံးကြီးကိုကော့ပေးပီး ခါးကိုညွှတ်ထားလိုက်တယ် တံတောင်ဆစ်နဲ့ မွေ့ယာ ကိုထောင်ထားလိုက်တော့ ကျားကြိးရေသောက် ပုံစံနဲ့ကွက်တိပဲလေ အာ့ကို ကျွန်မသူငယ်ချင်းလဲကြိုက်ပုံရတယ် …..
ကျွန်မလဲ ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေးရတော့ အရမ်းခံ့လို့ကောင်းတာ…မိန်းကလေးတိုင်းအဲ့လိုပုံစံ ကိုကြိုက်ကြတယ် ….မယုံလိုက်မေးကြည့်……အာ့နဲ့ သူ့ရဲ့ဆောင်ချက်တွေအရမ်းမြန်လာတယ် ….သူလိုးနေနာအပျိုစစ်ကိုပါကင်ဖောက်နေနာပါလားဆိုတာကိုတောင် မေ့နေသလားမသိ….
ကျွန်မကို ဖာသည်မတစ်ယောက်ကိုလိုးနေသလို အောကားရိုက်နေသလို အားရပါးရကိုလိုးနေတာ ကျွန်မလဲခံလို့ကောင်းနေနာကြောင့် နဲနဲအော်ရုံကလွဲလို့ သူ့ကိုမလုပ်နဲ့လို့မတားတော့ဘူးလေ သူလဲအားရပါးရကိုလိုးတာ ….
အဲအချိန်မှာ သူ့အတွက်လိုတာက ကျွန်မသာဆံပင်ရှည်ခဲ့ရင်ဆိုတာပဲလေ….ကျွန်မက ယောက်ကလျာဆိုတော့ ( ဗစ်တိုးရီးယား ဆံပင်ပုံစံ) ဆိုတော့ ဆံပင်ဆွဲပီးတော့တော့ လိုးလို့မရဘူးလေ…..
ဒါမဲ့ကျွန်မအပေးတွေကိုသဘောကျနေပုံပါပဲ….ဘာပဲဖြသ်ဖြစ်လေ သူလိုးလာတာ ၁နာရီပြည့်တော့မယ် မညာမတာ…အပျိုကိုပါကင်စဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာအဲ့လောက်မလိုးသင့်ဘူးဆိုတာကို စာအုပ်တသ်အုပ်မှာကျွန်မဖတ်ဖူးထားတယ်….
သူကနော့မသိဘူးထင်ပါတယ်ကျွန်မကိုမညှာမတာကိုလိုနေတာ…..ခနကြာနော့သူအရမ်းဆောင့်ချက်နွေမြန်လာပြီး ကျွန်မကျောကုန်းပေါ် မှောက်လျက်ကြီးလဲချလိုက်တယ်လေ…သူ့လရည်ဖြူဖြူတွေကတော့ သူ့လီးကိုစွပ်ထားတဲ့ကွန်ဒုံးထဲမှာပေါ့ ……ကျွန်မလဲပင်ပန်းသူလဲပင်ပန်းပိး အိပ်ယာဝင်ခဲ့ကြတယ်…..
နောက်နေ့တွေမှာတော့ ကျောင်းကစာသင်ခန်းထဲမှာ ယောက်ကလျာ ကြွက်ကြီးတို့ စတိတ် တုန်းက အောင်ကြီးတို့ဆိုတာ ယူပစ်သလိုပဲမရှိနော့ဘူးလေ ……
သူပေးတဲ့အရသာတွေကြောင့် ကျွန်မမမိန်းကလေးဘဝကိုပြန်ရောက်သွားရတယ် အရင်ကရှပ်အကျီ လက်တို့ပွပွတွေနေရာမှာ ကျွန်မနို့လေးတွေကို တင်းနေအောင် ထုပ်ပေးထားတဲ့ မြန်မာဆန်ဆန်အကျီလေးတွေနဲ့ ဘောင်းဘီကွာတားတွေနေရာမှာတော့ မြန်မာမိန်းကလေးပီပီ လုံချည်လေးနေရာယူလာတော့တယ်…..ဒါတွေကနော့ကျွန်မဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့နဲ့သူ့ကြောင့်ပါပဲ…….ပြီးပါပြီ။